Natiijada Tartankii xalay dhex maray dugsiyada sare ee ka qaybgalaya Barnaamijka Tartan & Tacliin ee Radio Daljir. – Radio Daljir
Natiijada Tartankii xalay dhex maray dugsiyada sare ee ka qaybgalaya Barnaamijka Tartan & Tacliin ee Radio Daljir.
Agoosto 10, 2011 12:00 b 0
Bossaso,Aug, 11 – Tartankii xalay oo ahaa mid aad u xiisa badan ayaa waxaa qaybtii hore ee barnaamijka ku loolamay dugsiyada sare Al-najax Bossaso iyo Sh. Cismaan qardho waxaana 14 buundo ku badiyey dugsiga Sh. Cismaan, halka Al-najax Bossaso uu keenay 8 buundo. Waxaana sidaasi 3-dii dhibcood ku aruursaday dugsiga Sh. Cismaan ee magaalada Qardho, waxaana ay labada dugsi ku wada jiraan (group-ka E).
Qaybtii dambe ee barnaamijka waxaa foodda is daray labada dugsi sare ee Muntadda Burtinle iyo Amaamu-nawaawi Garoowe, waxaana 10 buundo ku badiyey dugsiga Nawaawi ee magaalada Garoowe, halka Muntadda burtinle uu helay 6 buundo. Waxaana sidaasi 3 dhibcood ku helay dugsiga Nawaawi. Labadan dugsi waxay ay ku wada jiraan (group-ka F).
Afarta dugsi ee caawa tartamay ayaa soo bandhigay tartan aad u kulul waxaana dugsi walba uu horay u soo tartamay hal mar. waxaana u dhiman hal mar oo kale, kaas oo ah kan wareegga labaad ee barnaamijka loogu gudbayo.
Barnaamijka Tartan iyo tacliin oo uu sanad walba qabto Radio Daljir ayna ku tartamaan dugsiyada sare ee ku yaalla deegaanada Puntland ayaa waxaa sanadkan si wada jir ah u maalgalinaya shirkadda isgaarsiinta ee Golis iyo wasaaradda waxbarashada ee Puntland. Waxaana dhinaca farsama ee barnaamijka hagaya daladda waxbarashada ahliga ah ee Puntland.
Caawa waxaa ku ballansan barnaamijka Tartan iyo Tacliin dugsiyada sare ee Muntadda Qardho iyo Burtinle secendry oo kulmi doona qaybta hore ee barnaamijka kuna wada jira (group-ka A) iyo Sh. Xamdaan Bossaso iyo Al-nuur Baran oo tartami doona qaybta dambe ee barnaamijka kuna wada jira (group-ka B)
Sheekh Somali ah, si wayna looga yaqaanay dalka Koofur Afrika, oo shalay dalkaasi lagu dilay.
“Joojiya nabaadguurinta ummadda aad nabaadguurinaysaan, dadka aan mudnayn dilka aad dilaysaan joojiya” Garaad C/llahi Cali Ciid.